Xisbigga dhexe oo dhaliilay hindisaha dowladda ee dhalaanka keli socdka ah | Somaliska
Xisbigga dhexe oo dhaliilay hindisaha dowladda ee dhalaanka keli socdka ah
Xisbigga dhexe ee dalkaan Iswiidhan ayaa ka soo horjeestay hindisaha dowladda ee ay soo saartay kaas oo ku wajahan dhalaanka keli socodka ah. Hindisahan oo ahaa in dhalaankii dalkaan yimid wixii ka horeeyey 25 nofeember 2015-tii ee in ka badan 15 bilood sugayey codsigooda in ay markale codsan karaan sharciga ku meel gaarka ah. Hindisahan ayaa sidoo kale ku lamaanan dadkii horey loogu diiday sharciga ee da’dooda la kor dhiyey.
“Foormarlka haatan la soo bandhigay, waxaa ku jira dul duleelo iyo qabyo. Waxaa jira su,aalo badan oo aan weli laga jawaabin” ayey tiri Annie Lööf oo maqaal ay maanta oo isniin ah ku daabacday wargeyska SVD ku sheegtay sidaas.
Annie Lööf oo ah gudoomiyaha xisbiga dhexe ee center partiet-ka, ayaa sidoo kale maqaalkeeda ku sheegtay hindisaha ay dowladda soo gudbisay ee la xirriira dhalaankaasi keli socdka ahi ay ka dhiman yihiin waxyaabo badan oo qabyo ah. Qoraal ceeynkas oo kale oo ay soo dhigtay barteeda twitter-ka ayey farta ku fiiqday.
Horey ayaa xisbiyadii kale waxaa ay gaashaanka u daruureen hindasahan ay dowladda bishii hore soo bandhigtay. Dowladda ayaa haatan waxeey taageero ka raadineeysa xisbiga dhexe ee center partiet-ka.
Soomaalida oo ugu badan dadka Sweden iska dhiibay sanadkaan
Websitekii soo bandhigay macluumaadka magangalyo doonka oo la xiray
Siiriyaanka, Soomaalida & Dooda Siyaasada